नेपाली TV UK रिपोर्टेर भन्छन "कती पैसा खान्छस? [Archive] - NepaliSamajUK Forum
NepaliSamajUK Forum > General Category > Sabai Ko Sajha Corner > नेपाली TV UK रिपोर्टेर भन्छन "कती पैसा खान्छस?
View Full Version : नेपाली TV UK रिपोर्टेर भन्छन "कती पैसा खान्छस?
14th June 2008, 18:24
यो आरोप लगाउने व्यक्ति हुन् पुरुषोत्तम ढकाल।
पढाइमा व्यस्त थिएँ। पढाइसम्बन्धी कुरा गर्न नै याहू च्याटमा साइन इन हुने बित्तिकै एउटा अपरिचित व्यक्ति आएर सीधै भन्न थाल्यो “कति पैसा खान्छस् साउथ ब्लकको ? तँ साउथ ब्लक (भारत) बाट सञ्चालित हैनस्” । अचम्म लाग्यो को रैछ भनी। उनैले परिचय दिए म पुरुषोत्तम ढकाल, बेलायतको नेपालीटिभीमा काम गर्छु अहिले। सुरुमा नै मैले म बिजी छु भनेको थिएँ, एकोहोरो गाली गरेको गर्*यै बा…आरोप लगाएको लगायै। सहेर बसेँ धेरै तर एकोहोरो आरोप आएको आयै। कहिले भारतीय दलाल भनेको छ कहिले नेपाली भएर बाँच्न नपाउने दिन ल्याइस् तैँले भन्छन् बा।
सामान्य ब्लग चलाउन पनि दूतावासबाट पैसा आउँदो रहेछ भने त त्यो त अचम्मै भयो नि। यसो सोचेर हेरेँ, हैन मैले भारतीय दूतावासको चलखेलका बारेमा केही लेखेकै छैन त ? उनले च्याटमा गाली गर्नुअघि पनि म पोखराबाट विनोद धौलागिरीले लेखेको भारतीय राजदूतको चलखेलसम्बन्धी ब्लगको सम्पादन गर्दैथिएँ, जुन भोलि राखिँदैछ।
भन्छन् नि फूलको आँखामा फूलै संसार। राजावादीका रुपमा चिनिने उनी आफूले अरु ठाउँबाट पैसा खाए जस्तो सबैलाई त्यसरी पैसा खाने देख्छन् कि के हो ? अचम्म छ बा। लाग्यो, राजा पाखा लागिसके पनि एक थरि पूर्वराजावादीहरु भने आफैलाई मात्र राष्ट्रवादका प्रवक्ताका रुपमा ठान्ने प्रवृत्ति देखियो उनको भनाईले। उनीहरुको हिसाबमा त अरु सबै खत्तम, राजावादीहरु मात्रै राष्ट्रवादी। अब राजा गएपछि देश रहँदैन, देश टुक्रन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने राजाले पनि कम्ति अराष्ट्रवादी काम गरेका छैनन्। कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको महेन्द्र कै पालामा थियो। राजावादी हुँदैमा अराष्ट्रवादी हुँदैन र गणतन्त्रवादी हुँदैमा सबै अराष्ट्रवादी हुने भए त राप्रपा नेपालको पक्षमा भोट खसाउने एक प्रतिशत मतदाता मात्रै राष्ट्रवादी भए नि। पूरै देश त अराष्ट्रवादी पो भए त।
राष्ट्रवादी हुनु एकदम राम्रो कुरा हो। राष्ट्रको चिन्ता गर्नु सच्चा नागरिकको धर्म हो। तर घोडाको आँखामा पट्टी बाँधे जस्तो आफूहरु बाहेक सबै अराष्ट्रवादी ठान्ने अनि राजाको विरोध गर्ने जति सबै भारतीय दूतावासबाट नै सञ्चालित हुन्छन् भने कहाँसम्मको साँघुरो सोच ? गणतन्त्रवादीहरु मात्र कम्ति राष्ट्रवादी हुँदैनन्। उनीहरुलाई पनि देशको कम्ता चिन्ता हुँदैन। हो, बिकेका छन् केही सञ्चारकर्मीहरु पनि भारतीय दूतावासको पैसामा। एजेन्टहरु छन् भारतका लागि काम गर्ने। तर सबै त्यस्ता हुँदैनन्। गणतन्त्रवादीहरु सबै भारतीय दूतावासको पैसामा चलेको छ भन्ने निकृष्ट सोच र आरोप त मलाई अत्यन्तै नीच लाग्यो। त्यही भएर परीक्षाका बीच पनि यो ब्लग लेखेर केही समय नष्ट गर्न बाध्य भएको हुँ।
पुरुषोत्तम ढकाल नसुध्रिएलान् तर उनी प्रवृत्तिका मानिसहरुको सोचमा सुधार आउन जरुरी छ। किनभने उनीहरु पनि यही देशका नागरिक हुन्। पूर्वराजावादी भए भन्दैमा उनीहरुले आफूलाई मात्र राष्ट्रवादीका रुपमा (त्यसैलाई भनिन्छ मण्डले राष्ट्रवाद) लिन हुँदैन। नयाँ नेपालको निर्माणमा जुट्नु पर्ने बेला हो यो। प्रचण्डदेखि गिरिजासम्मका झलनाथदेखि उपेन्द्र यादवसम्मका नेताहरुलाई सतर्क गराउन जरुरी छ, खबरदारी गर्न जरुरी छ। राजाको जमाना गयो, राजा भए मात्र राष्ट्रियता रहन्छ भन्ने सोच पनि त्याग्न अब जरुरी छ।